OTU ESI ACHỌTA BIOS MA Ọ BỤ UEFI - BIOS - 2019
Chọpụta ma ọ bụrụ na BIOS ma ọ bụ UEFI na-eji kọmputa.
Ruo ogologo oge, ụdị isi ngwa ngwa nke motherboard ejiri mee bụ BIOS - Bọgwụ Mnput /Outọ System. Site n'iwebata nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na ahịa, ndị na-emepụta ihe na-agagharị na nke ọhụrụ - UEFI, nke na-anọchi anya Untụgharị Eenweghi ike Firmware Mnterface, nke na-enye ndị ọzọ nhọrọ maka ịhazi ma na-arụ ọrụ na osisi. Taa, anyị chọrọ ịme ka ị mara ụzọ iji chọpụta ụdị firmware motherboard eji na kọmputa.
Esi mara ma ọ bụrụ na BIOS ma ọ bụ UEFI arụnyere
Mbụ, okwu ole na ole banyere ọdịiche nke otu nhọrọ site n'aka onye ọzọ. UEFI bu uzo n 'ugbua na nke ugbua nke nlekota oru nlekota oru - i nwere ike ikwu na nke a bu osite di omimi nke osiri ichota nke na enye gi ohere imezi komputa gi n'enweghi diski ike n'ime uzo. BIOS na-akawanye nká, agbanwebeghị na ihe karịrị afọ 30 nke ịdị adị ya, ma taa, ọ na-akpata ihe nhụsianya karịa ezi.
O kwere omume ịchọpụta ụdị software eji ma tupu ebunye kọmputa ahụ n'ime usoro, ma ọ bụ site na OS onwe ya. Ka anyị malite na nke ikpeazụ, ebe ọ bụ na ọ dị mfe ịrụ.
Nzọụkwụ 1: Nyochaa yana ngwaọrụ ngwaọrụ
Na usoro sistemụ niile, n'agbanyeghị ezinụlọ, enwere ngwaọrụ ndị ị nwere ike ịnweta ozi gbasara ụdị nke ngwa ngwa.
Na Osise Microsoft, ịnwere ike ịchọpụta ozi dị mkpa iji ihe ọrụ msinfo32.
Jiri ụzọ mkpirisi keyboard Nweta + R ịkpọ oku Gbaa ọsọ. Mgbe emechara ya, tinye aha na igbe ederede. msinfo32 wee pịa "OK".
Ngwaọrụ ga-agba ọsọ. "Ozi System". Gaa na ngalaba ahụ n'otu aha ahụ jiri menu na ekpe.
Lezie anya n'akụkụ aka nri nke window - ihe a chọrọ ka a na-akpọ "Ọnọdụ BIOS". Ọ bụrụ na egosiri "Oge agafeela" ("Ntọala"), nke a bụ kpọmkwem BIOS. Ọ bụrụ na UEFI, mgbe ahụ na ahịrịokwu a kapịrị ọnụ, a ga-ahazi ya.
Na sistemụ arụmọrụ dabere na kernel Linux, ịnwere ike ịnweta ozi dị mkpa iji akara. Gbaa ya ma tinye iwu ọchụchọ a:
ls sys / firmware / efi
Site n'iwu a, anyị na-achọpụta ma ndekọ dị na sys / firmware / efi dị na usoro Linux faịlụ. Ọ bụrụ na ndekọ a dị, motherboard na-eji UEFI. Ya mere, ọ bụrụ na a chọtaghị ndekọ a, BIOS naanị dị na "motherboard".
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụzọ usoro iji nweta ozi dị mkpa dị mfe.
Usoro 2: Ngwaọrụ ndị ọzọ
Ị nwekwara ike ịchọpụta ụdị nke ngwa ngwa nke motherboard na-ejighi na-ejikwa sistemụ arụ ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na otu n'ime esemokwu dị iche n'etiti UEFI na BIOS bụ iji njigide eserese, yabụ ụzọ kachasị mfe ịbanye n'ụdị akpụkpọ ụkwụ kọmputa bụ iji chọpụta ya.
Gbanwee na BIOS mode nke desktọọpụ gị ma ọ bụ laptọọpụ. E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee nke a - a na-edepụta nhọrọ ndị kachasị na isiokwu na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ihe omumu: Otu esi abanye BIOS na komputa
BIOS na-eji ọnọdụ ederede na agba abụọ ma ọ bụ anọ (ọtụtụ mgbe na-acha anụnụ anụnụ-agba ntụ, ma atụmatụ ụcha a kapịrị ọnụ dabere na onye nrụpụta).
EUFI dị ime ka ọ dị mfe maka onye ọrụ njedebe, ya mere na anyị nwere ike ịhụ ndị na-ese foto na njikwa site na iji ntan.
Biko rịba ama na na ụfọdụ nsụgharị nke UEFI, ọ ga-ekwe omume ịgbanwee n'etiti ụdịdị ederede na ederede kwesịrị ekwesị, ya mere, usoro a enweghị ezigbo ntụkwasị obi, ọ ka mma iji ụlọ ọrụ ahụ mee ihe ọ bụla o kwere mee.
Ịmata ọdịiche dị na BIOS sitere na UEFI dị nnọọ mfe, yana ịchọta ụdị nke a na-eji na motherboard nke desktọọpụ PC ma ọ bụ laptọọpụ.